Series မဟုတ်ဘူး. Item Name Parameters
Since 1985 to present, more than 50000 units high-quality generator units are widely used in the railway, oil field, hospital, factory, building, port and troops. It can be seen that Sinfon power generator sets provide power continuously on Qinghai-Tibet Plateau with average altitude more than 4000m, cold Northern China oil field and oceangoing cargo vessel sailing all over the world. စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 1985, SINFON POWER သည် R ကိုအထူးပြုသည်&: D, ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု, ဓာတ်ငွေ့, ဇီဝစွမ်းအင်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်စက်များနှင့်ပြည့်စုံသောစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များပေးသည်.
3. Our engineer team will solve your technical problems within 48 နာရီ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：Crawler အမျိုးအစား Multifunctional Workstation, အရေးပေါ်ယာဉ်